यस्तो छ आविष्कार केन्द्रले कोरोना संक्रमितको सेवाको लागि बनाएको रोबोट
आइतबार, १४ बैशाख, २०७७
काठमाडौँ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा उपयोगी हुने रोबोट बनाएको छ । संक्रमित र स्वास्थकर्मीबिचको दूरीको मध्यस्तता गर्ने गरि केन्द्रले रोबोट बनाएको हो ।
आविष्कार केन्द्रका सुरज कार्कीका अनुसार यो रोबोट करिब १२ दिन लगाएर बनाएको हो । सो रोबोटले कोरोनाका बिरामीहरूलाई खाना, औषधिलगायतका सामग्री पुर्‍याउने छ । यस्तो रोबोट नेपालकै पहिलो भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले बताएका छन् । पुनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसो हेर्दा यो रोबोट जस्तो देखिँदैन तर काम भने राम्रोसँग गर्छ,’ पुनले आफ्नो फेसबुकमा रोबोटको भिडियो पोष्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘यो रोबोट आज नेपाली सेनाको कोरोना अस्पतालमा जान्छ ।’
‘यो रोबोटको विकास गर्न आविष्कार केन्द्रका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई ११ दिन जति लाग्यो । यसमा प्रयोग भएको ट्रली नेपाली सेनाले नै दिएको हो । अन्य पार्टपुर्जाहरूको मात्र मोटामोटी खर्च ७५ हजार रुपैयाँ जति लागेको छ,’ पुनले लेखेका छन् ।
रोबोट आइतबार नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र
विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन बजेट विनियोजन
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत ग
श्रमिक र रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले सामाजिक कोषमा जम्मा गरिदिने
काठमाडौँ । सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयु